Casharkan, waxaan ku arki doonaa midabada Ingiriisiga. Mawduucayada loogu magac daray midabada Ingiriisiga, waxaanu ku arki doonaa labadaba magacyada midabka Ingiriisiga oo waxaanu samayn doonaa jumlado ku saabsan midabada Ingiriisiga. Waxaan sidoo kale samayn doonaa layliyo ku saabsan midabada Ingiriisiga.
Sida loo akhriyo oo loo qoro midabada Ingiriisiga
Baro Ingiriiska Waa lagama maarmaan in la raaco hab gaar ah. Waa inaan xusnaa tafaasiisha kuu ogolaanaysa inaad luqaddan ku barato hab ka fudud, iyo sidoo kale qaab-dhismeedka jumlada iyo xeerarka naxwaha. Halkaa marka ay marayso, waxaad ku bilaabi kartaa barashada midabada Ingiriisiga.
Navy Blue: buluug badeed
ugu caansan Higaada Ingiriisiga ee midabada waa sidaan. Haddaba aan eegno sida loogu dhawaaqo!
Natiijo ahaan, waxaad ku dhawaaqi kartaa midabada Ingiriisiga sida kor ku xusan. Hadda aan jumlad ahaan u isticmaalno midabada Ingiriisiga si aad si fiican u fahamto!
Waan rinjiyeeyay guriga cad. (Anigu guriga cad ayaan ku sawirayay.)
Waxaan jeclaan lahaa xidhashadayda cas (Waxaan rabaa inaan xidho dharkayga cas.)
Green waa kan i jecel midabka. (Cagaarku waa midabka aan jeclahay.)
Runtii waxaan jeclahay inaan xidho kayga buluug (Waan jeclahay xidhashada surwaalkayga buluuga ah.)
indhahaygu waa bunni. (Indhahaygu waa bunni.)
Shaqaaluhu waxay xidhaan orange (Shaqaaluhu waxay xidhaan jaakadaha liimiga ah.)
Inta badan midabka gabadha ay jeceshahay waa iyo guduud. ( Midabka gabdhaha badankoodu jecel yihiin waa guduud.)
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysto madow (Waxaan rabaa inaan haysto baabuur madow.)
Grey mar walba dharku waa kuwa aan jeclahay. (Dharka cawl had iyo jeer waa kuwa aan jeclahay.)
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato midabada Ingiriisiga
midabada Ingiriisiga Waad ku mahadsan tahay tan, barashada luqaddan waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan! Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin sida midabada muhiimka u ah adduunkeena! Midabada; Waa mid ka mid ah kiciyeyaasha ugu weyn. Waa inaan sheegnaa in midabadu ay muhiim u yihiin wada-xiriirka, ku-darsiga dareenka, bixinta fariinta iyo qaar kale oo badan. Intaa waxaa dheer, waa in la sheegaa in carruurta, gaar ahaan kuwa hadda bilaabay barashada Ingiriisiga, ay bartaan midabyo leh xiiso weyn. Haddii aad barato Ingiriisiga midabada aad u isticmaasho dhinac kasta oo nolol maalmeedkaaga ah, waxaad luqaddan ka bilaabi doontaa meesha ugu fudud uguna raaxada badan. midabada Ingiriisiga; Aad bay u qiimo badan tahay xagga balaadhinta erayadaada iyo kordhinta dhiirigelintaada waxbarasho.
midabada Ingiriisiga Kahor intaadan u dhaqaaqin waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato, waa inaad eegtaa goobta aad ku nooshahay! Waxaad markhaati ka noqon doontaa jiritaanka midab kala duwan meel kasta! Si kastaba ha ahaatee, imisa midabo ah ayaad ku taqaanaa Ingiriisi? Gaar ahaan haddii aad hadda bilowday inaad barato Ingiriisiga, waa inaad shaqadan ka dhigtaa mid fudud adigoo baranaya Ingiriisiga midabada sare.
midabka iyo midabka Dad badan ayaa la yaabay farqiga u dhexeeya ereyada. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan nidhaahnaa in labada kelmadood ay dhab ahaantii isku micne yihiin. Qoritaanka midabka ama midabka waa muhiim marka la eego go'aaminta luqadda Ingiriisiga ee waddanka laga isticmaalo. Color; Waxaa iska leh Ingiriisi Maraykan ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagu isticmaalaa gudaha Mareykanka. Colour waa kelmad Ingiriisi ah. Waa inaan sheegnaa in laga isticmaalo wadamada sida New Zealand iyo Australia, gaar ahaan England. Intaa waxaa dheer, cawl oo tilmaamaya midabka cawl; Inkasta oo ay tahay kelmed Ingiriisi, cawl waxa iska leh Ingiriisi Maraykan ah.
Casaan, buluug iyo jaalle; midabada aasaasiga ah waxaa loo yaqaanaa Si kale haddii loo dhigo, waa in aan nidhaahnaa in midab kasta oo muuqda uu dhab ahaantii ka kooban yahay saddexdan midab. Natiijada isku darka saddexdan midab ee kala duwan, midabyo dhexdhexaad ah ayaa soo baxaya. midabada aasaasiga ah ee Ingiriisi midabada aasaasiga ah iyadoo la magacaabayo midabada dhexe midabada labaad ayaa lagu magacaabaa.
Casaan iyo jaale Midabka oranji (orange) wuxuu ka soo baxaa isku darka (casaan iyo jaalle). Orange; midabka dhexe.
Buluug iyo huruud Isku darka (buluug iyo jaalle) waxay soo saartaa midabka cagaaran. Cagaar; soo jiidata dareenka sida midab dhexdhexaad ah oo kala duwan.
Casaan iyo buluug Laga soo bilaabo isku dhafka ah (casaan iyo buluug) midab buluug ah ayaa soo baxaya. Purple; Midab kale oo dhexdhexaad ah.
Waxaas oo dhan waxaa dheer, xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaadan hubin sida loo aqoonsado midabka. Si kale haddii loo dhigo, inkasta oo midabka aad aragto uu u ekaan karo midab hoose ama mid sare, dhab ahaantii midabkaas kama tirsana. Xaaladahan oo kale, daba-galka -ish waa lama huraan. GuduudWaxaa jiri kara isticmaalka midabyo kala duwan sida hurdi, brownish. Mawduucan waxaan ku sharixi doonaa tusaalayaal si aad si fiican u fahanto!
Waxay haysataa bac guduudan. (Waxay haysataa boorso guduudan.)
Eeg shaararka liimiga ah. Halkee buu ka iibsaday? (Bal eeg tii liimiga ah! xagee ka keenay?)
Intaa waxaa dheer, sida Turkiga, waxaad ku dari kartaa sifooyin iftiin ama mugdi ah hortooda si aad si fiican ugu sharaxdo midabada Ingiriisiga. Waxaad samayn kartaa qeexitaanno sax ah ee midabada adoo isticmaalaya buluug madow (buluug madow), bunni khafiif ah (brown khafiif ah). Intaa waxaa dheer, midabyo dhalaalaya Waxa kale oo aad isticmaali kartaa sifada dhalaalaya.
Sidoo kale barashada midabada, waa inaad barataa sida loo weydiiyo midabka wax kasta oo Ingiriisi ah. Halkaa marka ay marayso, waxa aynu odhan karnaa weedhahan soo socda ayaa ku anfacaya!
Midabkee kani yahay? (midabkee kani yahay?)
Midabkee ayaad door bidaysaa? (midabkee ayaad door bidaysaa?)
Ma leedahay midabo kala duwan oo kan ah? (Miyaa tan midabo kala duwan leh?)
Ma casaan baa? (Tani ma casaan ma leedahay?)
Waxaan doorbidayaa dharka buluugga ah
Waxaan leenahay midabyo kala duwan. Ma doonaysaa in aad eegto iyaga? (Waxaan sidoo kale leenahay midabyo kala duwan. Ma rabtaa inaad eegto iyaga?)
Natiijo ahaan, waxaad la kulmi doontaa fudayd markaad baranayso midabada Ingiriisiga oo leh jumladaha sare. Haddii aad barato qaababka noocaas ah, midabadu waxay noqon doonaan kuwo joogto ah. Intaa waxaa dheer, waa inaad caawimo ka heshaa kuwa kugu xeeran markaad baranayso midabada Ingiriisiga. Gaar ahaan, waa inaad u fiirsato midabada goobtaada nool adigoo macno siinaya. Haddii aad aragto midabka faahfaahin kasta oo ku soo socda oo aad hesho Ingiriis u dhigma isla markaaba, waxaad baran doontaa ingiriisiga u dhigma dhammaan midabada muddo ka dib.
midabada Ingiriisiga; Waa mid fudud oo lagu raaxaysan karo labadaba. Waad ku mahadsan tahay midabada, waxaad haysataa fursad aad ku muujiso naftaada si aad uga wanaagsan markaad ku hadlayso Ingiriisiga. Intaa waxaa dheer, online midabada Ingiriisiga Waa inaan ku darnaa inay jiraan agabyo badan oo la heli karo si ay kaaga caawiyaan inaad ku tababarato.
Layliga ku saabsan midabada Ingiriisiga
Hoos waxaad ka heli kartaa jawaabaha meelaha bannaan ee kore.
Haddii aad xalliso imtixaanka hoose, waxaad yeelan doontaa fahamka ugu fiican ee midabada.
Waa kee midabka aasaasiga ah?
Midkee aan ahayn midabka aasaasiga ah?
Markaad isku darto casaan iyo jaalle, waxaad helaysaa ....
Markaad isku darto buluug iyo casaan, waxaad heleysaa….
Markaad isku darto jaale iyo buluug, waxaad heleysaa….
Marka aad isku dartid madow iyo caddaan, waxaad heleysaa….
Markaad isku darto cadaan iyo casaan, waxaad helaysaa….
Waxaad is barbar dhigi kartaa jawaabahaaga iyo jawaabaha saxda ah ee hoose.
midabada Ingiriisiga iyo kuwa u dhigma ee Turkiga aad bay kuu anfici doonaan!
caddaan huruud ah
huruud ah turquoise
beige qalin ah
Tusaalaha Su'aalaha ku saabsan Midabka Ingiriisiga
Midabkee miisku yahay ? (bunni)
Miisku waa bunni
Bisadaha ma madow baa mise bunni? (madow)
Bisadaha waa madow
Waa maxay midabada derbiyada? (cad)
Darbiyada waa caddaan
Ubaxyadu ma guduudan yihiin mise caddaan? ( diidmo)
Ubaxyadu waa casaan
cirku waa maxay midabka? (buluug)
Cirku waa buluug
Waxaad ku dhufan kartaa tusaalooyinka kore! Tusaalooyinkan mahadsanid, aad bay kuugu fududaan doontaa inaad ku fahanto midabada Ingiriisiga.
Asxaabta qaaliga ah; waa in aan sheegno in fikradda ah barashada luqad cusub uu aqbalo qof kasta. Waa in aan sheegnaa in ay leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin la kulanka dad cusub, xiriirinta qaab aad u wanaagsan, fahamka dhaqamada kala duwan si qoto dheer, iyo ka eegida adduunka gebi ahaanba ka duwan. Intaa waxaa dheer, haddii aad barato luuqad ka duwan, waxaad heli doontaa faa'iido inaad noqoto qof aad u wanaagsan. Sida lagu sheegay daraasado, waxa la go'aamiyay in dadka ku hadli kara in ka badan hal luuqad ay leeyihiin maskax aad u firfircoon oo hal abuur leh.
Haddii aad dareento inaadan ku filnayn inaad luqad cusub barato, waa inaad ka takhalustaa fikirkan sida ugu dhakhsaha badan. Waxaad dareemi doontaa nasiib haddii aad qalbigaaga dejiso geeddi-socodkan, kaas oo noqon doona caajis, caqabad iyo xitaa waqti ka badan inta aad malaynayso, laga bilaabo bilowga hore. Waxaa la og yahay in ilaa 6 luqadood lagaga hadlo adduunka. Ka mid ah luqado badan isku dayaya inuu barto ingiriisiga waa doorasho. Waa hagaag, Baro Ingiriiska Waa maxay sababta loogu baahan yahay?
Sababaha loo barto Ingiriisiga!
English; Sida aad qiyaasi karto, waa luqadda ugu badan adduunka. Inkasta oo dad badani ay muujiyaan Isbaanishka arrintan, waxaan dhihi karnaa in xukunka Ingiriisku uu aad u ballaaran yahay. Waxaa lagu qiyaasaa in shantii qof ee adduunka ku nool mid ka mid ah uu ku hadlo Ingiriisiga. Intaa waxaa dheer, waa in aan la illoobin in ay jiraan kuwa fahmi kara iyo sidoo kale kuwa ku hadli kara Ingiriisiga. Natiijo ahaan, waxaan dhihi karnaa in meel kasta oo ay ku nool yihiin adduunka, dadku waxay bartaan Ingiriisiga oo ah luqad labaad oo ajnabi ah ka dib afkooda hooyo. Si kale haddii loo dhigo, Baro Ingiriiska; Waxay noqon doontaa mid ka mid ah go'aamada ugu fiican ee aad gaadhi doonto noloshaada.
Shaqo iyo mushahar ka wanaagsan xaaladaha dhaqaale ee maanta; Shaki la'aan waa riyada qof walba. Waxaan dhihi karnaa shirkaduhu waxay noqdaan kuwo caalami ah, iyada oo aan loo eegin haddii ay yar yihiin, mid dhexdhexaad ah ama weyn yihiin. Halkaa marka ay marayso, in aan ka shaqeeyo shirkad caalami ah, waxaan marka hore English waa inaad barataa. Iyadoo aan loo eegin haddii aad ku nooshahay Shiinaha ama Jarmalka, waxaad fursad u heli kartaa inaad uga shaqeyso shirkad kasta oo caalami ah oo adduunka ah aqoontaada luqadda Ingiriisiga. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad Ingiriisiga u ogaato si aad u hesho mushahar wanaagsan! Markaad eegto kuwa ka shaqeeya shirkadaha sida Google, Facebook, Apple, oo qof kastaa rabo inuu ka shaqeeyo, waxaad arki doontaa in aqoontooda luqadda Ingiriisiga ay ku fiican tahay dhinac kasta.
Waxaan sheegnay in Ingiriisigu yahay luqad lagaga hadlo waddamo badan oo adduunka ah. Dhab ahaantii, waxaan dhihi karnaa in taariikhda maanta, 57 waddan ayaa leh luqadaha rasmiga ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo adeegsadaa luqadda rasmiga ah in ka badan rubuc ka mid ah waddamada adduunka. Tani kaliya waa sabab sax ah oo lagu baranayo Ingiriisiga!
Markaad ka fikirto adduunka ganacsiga, waxa ugu horreeya ee aad ka fikirto English Waa wax iska caadi ah! Sababtoo ah Ingiriisi; Waa luqadda caalamiga ah ee ganacsiga adduunka. Haddii aad barato Ingiriisiga, oo loo yaqaan luqadda software, sayniska, duulista, xiriirka caalamiga ah, dalxiiska iyo warbaahinta, waxaad fursad u heli doontaa inaad shaqo ka hesho fursado soo jiidasho leh shirkadaha caalamiga ah. Ka sokow, waa in aan sheegno in Ingiriisku yahay luqadda ganacsiga caalamiga ah. Ururo badan oo gaar loo leeyahay, oo ay ku jirto Qaramada Midoobay, waxay aqbaleen Ingiriisiga luqadda rasmiga ah.
Waa inaan xusno sifo kale oo Ingiriisi ah oo aanay dadka badankiisu fiiro gaar ah u yeelan. Ku dhawaad ​​80 boqolkiiba daraasaadka akadeemiyada aduunka iyo waraaqaha cilmi baarista English waxaa loo qoray sidii. Si ay u daabacaan mashaariicdooda oo ay uga faa'iidaystaan ​​daraasadaha akadeemiyadeed, gaar ahaan jaamacadaha adduunka caanka ka ah ee USA, barashada luqadda Ingiriisiga tacliin ahaan waa lagama maarmaan.
English Waa inaadan ku fikirin inaad wax barato oo kaliya xagga waxbarashada iyo shaqada. Haddii aad luqaddan u barato sida ugu wanaagsan, waxaad yeelan doontaa faa'iido dhinacyo badan leh markaad safarka ku jirto. Waddan kasta oo adduunka ah oo aad tagto English Waxay u badan tahay inaad la kulanto qof hadlaya. Haddii aad u aaddo waddan kale waxbarasho ama sabab kale, waa inaad barataa Ingiriisiga si aad u hesho waqti raaxo leh oo aad la sheekaysato dadka kale.
English; Sidoo kale waa afka warbaahinta. Xogta warbaahineed ee xayaysiisyada wararka ugu waaweyn aduunka sida telefishinka, majaladaha, wargeysyada, raadiyaha ayaa lagu soo saaray Ingiriisi ilaa waagii hore. Marka laga soo tago warshadaha filimada iyo muusiga ee Maraykanka, waa in aan sheegno in wargaysyada wararka Ingiriisku ay sidoo kale go'aaminayaan arrintan. Natiijo ahaan, waxaad u baahan tahay inaad taqaano Ingiriisiga si aad u daawato taxane iyo filimaan shisheeye ama aad ula socoto wararka. Haddii aad barato Ingiriisiga, luqadda warbaahinta caalamiga ah iyo farshaxanka, waxaad ku raaxaysan kartaa dhammaan noocyada agabka iyada oo aan loo baahnayn tarjumaad.
English; Waa luqadda internetka iyo sidoo kale luqadda warbaahinta. Inta badan shabakadaha aduunka waxay ku qoran yihiin Ingiriis. Waxaa jira shabakado badan oo Ingiriis ah oo ku saabsan maaddooyinka sida waxbarashada, ganacsiga iyo caafimaadka. Intaa waxaa dheer, waa in aan sheegno in bogagga aad booqato si aad u dhex gasho internetka oo aad waqti u qaadato iyagana waa Ingiriis. Halkaa marka ay marayso, haddii aad rabto inaad boqolkiiba boqol ka faa'iidaysato intarneedka, waa inaad barataa Ingiriisiga.
Muhiimadda barashada Ingiriisiga Waxay isu muujisaa inta badan dhanka waxbarashada. Luuqadda rasmiga ah ee waxbarashadu waa Ingiriis dalal badan oo Aasiya iyo Yurub ah, iyo sidoo kale Ameerika iyo Ingiriiska. Haddii aad ku hadasho Ingiriisiga, waxaad heli doontaa fursado badan oo tacliimeed oo dibadda ah.
Ingiriiska; Sidoo kale waa afka suugaanta. In la akhriyo shuqullada ay qoreen qorayaasha adduunka ugu caansan English Waa lagama maarmaan inaad ogaato. Si aad u fahamto qoraal qoran, waxaa lagama maarmaan ah in lagu akhriyo luqadda asalka ah. Waqtigan xaadirka ah, haddii aad Ingiriisida si fiican u baratay, waxaad heli doontaa fursad aad ku akhrido oo aad si fiican u fahamto shaqooyinka noocaas ah.
Waa inaan sheegnaa in Ingiriisku sidoo kale waxtar u leeyahay korriinka maskaxda. Si sax ah, haddii aad luqaddan barato, xusuustaadu aad bay u fiicnaan doontaa. Haddii aad ku hadasho laba luuqadood, maskaxdaadu waxay ahaan doontaa mashquul mar kasta. Si kale haddii loo dhigo, tani waa wax muujinaya in xusuustaadu sii xoogaysanayso. Iyo sidoo kale, Baro Ingiriiska; Waxay kaloo faa'iido u leedahay barashada luqadda labaad ee ajnabiga ah. Si waafaqsan cilmi-baarista, waa inaan sidoo kale sheegnaa in Ingiriisku faa'iido u yeelan doono maskaxdaada si ay isu ilaaliso markaad sii weynaato.
Gabagabadii, sababahan oo dhan dartood, waa inaad barataa Ingiriisiga adiga oo aan maskaxdaada shaki ku jirin. Baro luqaddan; Siyaabo badan ayay kaaga faa'iidaysan doontaa waxayna sidoo kale muhiim u noqon doontaa isku kalsoonidaada. Markaad baranayso Ingiriisiga, waxaad ogaan doontaa in daqiiqad kasta oo aad ku bixiso barashada luqaddan ay aad u qalanto. Haddii aad luqaddan si fiican u taqaan, waxaad heli doontaa faa'iido la taaban karo marka la eego sida kaamilnimadaadu kuugu habboon tahay.
Siyaabaha loo barto Ingiriisiga
midabada ingiriisiga ku baro Waa dabiici in aad rabto! Haddii aad barato midabada, kaas oo ah mawduuc aad u fudud, sida ugu fiican, waxaad arki doontaa in aqoontani ay aad waxtar u leedahay gaar ahaan nolol maalmeedkaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira dhibco kala duwan oo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato markaad horay u sii socoto hindisahaaga Ingiriisiga, oo aad ku bilowday midabyo. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad rabto inaad horumariso markaad baranayso Ingiriisiga, waa inaad u shaqeysaa si qorshaysan oo habaysan. Halkaa marka ay marayso, waxaanu filaynaa in taladan soo socotaa ay waxtar yeelan doonto!
midabada ingiriisiga ku baro Haddii aad rabto, waa in aad marka hore dhiirigelisaa naftaada. Halkaa marka ay marayso, yoolka aad dejin doonto ayaa kuu noqon doona dhiirigelin muhiim ah. Kadib markaad dadaal kugu filan geliso dhiirigelinta, waa inaad sidoo kale go'aamisaa heerka aqoonta Ingiriisiga. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay inaad aragto heerka aad ku sugan tahay. Waxaad noqon kartaa heerka bilowga ama heerka dhexe. Waxaa jira farsamooyin waxbarasho oo kala duwan heer kasta.
barashada Ingiriisida Waa inaad tix-raac u tixgelisaa habka. Waxaad aad ugu fiicnaan kartaa naxwaha. Si kastaba ha ahaatee, waa wax iska caadi ah in aad ku liidato hadalka iyo dhegeysiga. Halkaa marka ay marayso, waa in aad marka hore go'aamiso barnaamij shaqo cilladahaaga. Intaa waxaa dheer, waa inaad muujisaa in xirfadaha akhriska, qorista, dhegeysiga iyo ku hadalka ay aad faa'iido u yeelan doonaan inaad barato Ingiriisiga si dhab ah.
Intee da'da aad bilowday inaad barato Ingiriisiga ayaa sidoo kale aad muhiim u ah! Daraasaduhu waxay muujiyeen in barashada luqaddu ay tahay inay bilaabato da'da hore. Si kastaba ha ahaatee, barashada midabada Ingiriisida Weligaa aad kama daahdo. Waxaad bilaabi kartaa barashada Ingiriisiga da' kasta. Sababtoo ah, habab waxbarasho oo kala duwan ayaa loo adeegsadaa koox kasta oo da 'kasta. Waxaan dhihi karnaa in ay jirto waxbarasho loogu talagalay carruurta taas oo siyaabo badan oo dabiici ah iyo kala duwanaanshiyaha da'da ku haboon lagu xisaabtamayo. Waa in la xuso in waxbarasho dhamaystiran lagu dabaqo qaan-gaarnimada iyo xilliga dambe. Xitaa haddii aad ka daahday inaad barato Ingiriisiga, waa inaadan lumin dhiirigelintaada. Maskaxda aadanaha; Waxaa loo qorsheeyay in lagu barto luqadaha da' kasta. Waad ku mahadsan tahay hababka tababarka ku habboon, waxaad heli kartaa fursad aad ku barato xitaa waxyaabaha aad u maleyneyso inaadan baran karin.
Meesha aad ku baranayso Ingiriisiga sidoo kale waa muhiim! Halkaa marka ay marayso, dad badan barashada Ingiriisida Waxaan dhihi karnaa in uu dhibaato ku hayo. Haddii aad rabto, waxaad luqaddan ku baran kartaa raaxada gurigaaga. Thanks to horumarinta tignoolajiyada Baro Ingiriiska Waxaad haysataa doorashooyin badan oo magacaaga ah. Waxaad ku baran kartaa Ingiriisiga mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto, iyada oo ay ugu wacan tahay tababarka khadka tooska ah ee aad ka heli doonto intarneedka. Intaa waxaa dheer, waa in aad la qabsato waxbarashada Ingiriisiga nolol maalmeedka. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad u qiimeysaa waxaad baratay qaab wax ku ool ah oo aan ahayn aragti. Marka tan la eego, waxaan ku siin karnaa tusaale midabada Ingiriisiga ah, taas oo ah mawduuca maqaalkeena. Waa inaan sheegnaa in shay kasta oo deegaankaaga ah uu leeyahay ugu yaraan hal midab. Halkaa marka ay marayso, waxaan dhihi karnaa in midabadu ay noqon doonaan kuwo joogto ah maskaxdaada haddii aad barato Ingiriisiga u dhigma midabada alaabta kuugu dhow.
Sidaan horey u sheegnay, inta lagu jiro waxbarashadaada Ingiriisiga, aad ayey muhiim u tahay heerka aad joogto! Waa in aan xusno in ay jiraan lix heerar oo kala duwan marka loo eego Qaab-dhismeedka Guud ee Yurub ee Tixraaca Luuqadaha. A1 Bilow ve A1 Dugsiga Hoose Heerka; Waxa loola jeedaa heerka uu marayo tibaaxaha nolol maalmeedka fudud lagu qori karo laguna hadli karo. Waxaa jira heerar kala duwan: B1 Intermediate, B2 Upper Intermediate, C1 Advanced, C2 Proficient. Halkaa marka ay marayso, waa in la sheegaa in haddii aad hadda bilowday barashada Ingiriisiga, heerarka A1 iyo A2 ayaa kugu habboon. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah, waxaad u gudbi kartaa heerar sare waqti yar gudaheed.
Ugu dambeyntii, midabada Ingiriisiga Waa in aan sheegno in ereyga xafidista uu kugu habboon yahay waxbarashada Ingiriisiga, gaar ahaan Ingiriisiga.
# Sida loo akhriyo oo loo qoro midabada Ingiriisiga
# Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato midabada Ingiriisiga
# Layliga ku saabsan midabada Ingiriisiga
# Tusaalaha Su'aalaha ku saabsan Midabka Ingiriisiga
# Sababaha loo barto Ingiriisiga!
# Siyaabaha loo barto Ingiriisiga
Tags: 10 fasalka midabada Ingiriisiga, 9 fasalka midabada Ingiriisiga, midabada ingiriisiga